Sababaha iyo cawaaqibta wasaqowga wasakhda | Cusbooneysiinta Cagaaran
Maanta saddex meelood laba meel dadka adduunka waxay ku nool yihiin magaalooyin waaweyn. Magaalooyinku waxay noqdeen ilaha wasakhda qiiqa weyn iyo wasakhaynta acoustic. Meelaha ugu badan ee buuqa ka soo baxa magaalooyinka waa taraafikada waddooyinka. Isku soo uruurinta gawaarida, taraafikada, ciriiriga taraafikada, geesaha, iwm. Waxay sii daayaan buuq waxayna ku keeni karaan bini aadamka cuduro.
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) dejisaa xaddiga maalinlaha ah ee ah 65 decibel (dB) si aan waxyeello ugu yeelan caafimaadka. Hase yeeshe malaayiin dad ah ayaa la kulma heerar sare maalin kasta. Maxaa lagu samayn karaa xaaladan oo maxay yihiin halista ka dhalankarta joogtada ah ee heerarka sawaxanka sare?
1 Astaamaha lagu garto wasakhda buuqa
2 Buuqa magaalooyinka
2.2 Dhibaatooyinka wadnaha
2.3 Dhibaatooyinka maqalka
3 Wasakhda buuqa ayaa dhalisa dad badan oo jiran
4 Buuq iyo heerar caafimaad
5 Dhawaqa dabiiciga
6 Sida looga fogaado wasakheynta buuqa magaalooyinka
Astaamaha lagu garto wasakhda buuqa
Wasakhda buuqdu waxay leedahay astaamo gaar ah oo ka duwan waxyaabaha kale ee wasakhaysan:
Waa sunta ugu raqiisan ee wax soo saar waxayna u baahan tahay tamar aad u yar in la soo saaro.
Way adag tahay in la cabbiro lana tiro koobo.
Ma daayo hadhaaga, wax saameyn ah kuma yeelanayso deegaanka, laakiin waxay ku yeelan kartaa saameyn isugeyn ah saameynta ay ku yeelanayso aadanaha.
Waxay leedahay gacan ficil ah oo aad uga yar sunta kale, taas oo ah, waxay ku taal meelo aad u cayiman.
Kuma dhex socoto nidaamyada dabiiciga ah, sida hawada wasakhaysan ee dabayshu qaaday, tusaale ahaan.
Waxaa lagu arkaa oo kaliya hal dareen: maqal, taas oo ka dhigeysa saameynteeda mid la dhayalsan karo. Tani kuma dhacdo biyaha, tusaale ahaan, halkaasoo wasakhda laga dareemi karo muuqaalkeeda, urkeeda iyo dhadhaminteeda.
Khabiirka takhasuska leh ee wasakhaynta iyo buuqa Iyaga ayaa ah kuwa qiyaasa heerarka buuqa ee magaalooyinka soo saara khariidadaha buuqa. Waxay dejiyaan heerarka buuqa ee laga helo aag kasta oo ka mid ah magaalooyinka iyo heerarka marinka labadaba maalintii iyo habeenkii ee ay ahayd in lagu gaaro caafimaad wanaagsan.
Xad-dhaafka sawaxanka ayaa ka sarreeya maalintii marka loo eego habeenkii. Soo-gaadhista joogtada ah ee heerarka buuq badani waxay sababi kartaa jirro ama dhibaatooyin sida diiqad, walwal, muuqaalka dhibaatooyinka wadnaha Xitaa carruurta, dhibaatooyinku waxay u muuqan karaan inay ku liitaan habka waxbarashadooda.
Waxa kale oo jira dhibaatooyin kale oo laxiriira heerarka buuqa badan sida:
Meelaha magaalooyinka leh cawayska sare sida baararka, baararka, discos, dadku, iwm. Waxay u badan tahay inay yeeshaan heerar sawaxan sareeya goor dambe oo habeenkii ah. Tani waxay dhib ku keentaa hurdada dadka ku nool hareerahan.. Dhibaatada joogtada ah ee hurdada iyo saacadaha yar ee hurdada ayaa sababa hurdo la'aan. Intaas waxaa sii dheer, hurdo la’aanta ayaa kordhisa muuqaalka cudurada nafsaaniga ah sida diiqadda ama walaaca; iyo waliba isbadalada nidaamka difaaca jirka, hilmaanka iyo dhibaatooyinka waxbarashada.
Waxaa jira daraasado muujinaya in meelaha leh heerar sare buuqa ayaa kordhiyay isbitaallada la dhigo.
Heerka ugu sarreeya ee soo-gaadhista sawaxanka ay kugula talisay WHO waa 65dB inta lagu jiro maalinta. Soo-gaadhis maalinle ah oo daba-joog ah heerarka buuq ka sarreeya 65 dB ama soo-gaadhis ba'an oo ka sarreysa 80-85 dB waxay sababi kartaa carqaladeyn wadnaha oo muddo dheer ah, xitaa haddii kuwa ay saameysey aysan dareemin astaamaha cudurka. Kuwaas ay saameeyeen ma oga tan iyo markii jidhku ka jawaabayo heerarka sawaxanka badan adoo kicinaya hormoonada neerfaha ee kordhiya cadaadiska dhiigga, garaaca wadnaha, vasoconstriction iyo dhumucda dhiigga.
Sida iska cad, dadka waayeelka ah ayaa u nugul una nugul cudurka noocan ah sababo la xiriira soo noqnoqoshada heerarka sawaxanka sare.
Dadka inta badan soo noqnoqda meelaha shaqada ama raaxada leh ee buuqoodu sareeyo ayaa u nugul dhaawacyada maqalka Dhaawacyadani waxay burburiyaan unugyada ku jira dhegta gudaha waxayna dhaawacaan maqalka.
Maqal la'aanta waxay soo saartaa cawaaqibyo saameyn ku leh nolosheena maalinlaha ah, waxay xanibtaa xiriirada bulshada, waxay hoos u dhigtaa waxqabadka tacliinta iyo shaqada, waxay keentaa dareemo go'doon, kalinimo iyo niyad jab.
Si taas looga fogaado waxaa lagula talinayaa:
Ka fogow meelaha buuqa badan
Ku ilaali dhegahaaga ilaaliyeyaal ku habboon
Telefishanka iyo raadiyaha ayaa daarmay heer dhexdhexaad ah
Markaad isticmaaleyso dhagaha dhagaha, ha ka badnaan 60% mugga ugu badan
Ha dhaafin isticmaalkooda iyaga wax ka badan hal saac maalintii
Adeegso aalado leh qalab xadidaya mugga si aadan uga badin heerarka caafimaadka qaba
Markaad gaari wadid, ha u isticmaalin geeska si aan loo baahnayn
Inta lagu jiro dhacdooyinka muusikada ka fogow kuwa ku hadla
Wasakhda buuqa ayaa dhalisa dad badan oo jiran
Si loo qiyaaso loona isbarbardhigo darnaanta sunta wasakheynta, daraasad ayaa lagu sameeyay Machadka Barcelona ee Caafimaadka Caalamiga (ISGlobal), oo ah xarun ay kor u qaadday "la Caixa" Foundation Banking, oo qiyaastey, markii ugu horeysay, culeyska cudur ka dhasha qorshaynta magaalooyinka iyo gaadiidka ee magaalada Barcelona.
Waxaa ka mid ah dhammaan arrimaha deegaanka u keeni kara cudurrada muwaadiniinta, waa buuqa ka yimaada taraafikada sababta ugu badan, xitaa ka sarreeya cudurrada la xiriira jimicsi la’aanta iyo wasakheynta hawada.
Daraasaddan ayaa sidoo kale gaadhay gabagabadii in haddii ay Barcelona si fiican u qorsheyn lahayd meelaha magaalooyinka ah iyo gaadiidka waxay dib u dhigi kartaa ilaa 3.000 oo dhimasho sanadkii. Intaa waxaa dheer, haddii talooyinka caalamiga ah ee horumarinta dhaqdhaqaaqa jirka, laga fogaado soo-gaadhista wasakheynta hawada, buuqa iyo kuleylka la buuxiyo, 1.700 xaaladood oo cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga ah ayaa laga hortegi karaa sannad kasta, in ka badan 1.300 xaaladood oo dhiig-kar ah, oo ku dhow 850 xaaladood oo istaroog iyo 740 xaaladood oo niyadjab ah, iyo kuwo kale.
Wasakheynta sawaxanka ayaa sababa cuduro ka badan inta wasakheysan hawada
Buuq iyo heerar caafimaad
Qiyaasta dhawaaqa ee lagu cabbiray halbeegyada marka loo eego dhegta aadanaha waa:
0 Heerka ugu hooseeya ee maqalka
10-30 Heerka dhawaaqa hooseeya oo u dhigma wada hadalka hooseeya
30-50 Heerka sawaxanka oo u dhigma wada hadalka caadiga ah
55 Heerka raaxada acoustic celcelis ahaan
65 Heerka ugu badan ee la oggol yahay ee dulqaadka loomaro ee ay dejisay WHO
65- 75 Buuq xanaaq leh oo u dhigma waddo leh taraafikada, telefishan sare ...
75-100 Waxyeellada dhagaha ayaa bilaabmaysa, taasoo keenaysa dareemo aan fiicnayn iyo walwal
100-120 Khatarta dhago la'aanta
120 Xadka xanuunka acoustic
140 Heerka ugu sarreeya ee ay dhegta bini’aadamka u adkeysan karto
Iyada oo ay jirto wasakhda buuqa, jawiga magaalooyinka iyo heerarka sawaxanka sare waxaan ilaaweynaa dhawaaqa dabeecadda. Dad badan, xitaa socodka, waxay xirtaan sameecado waxayna dhageystaan ​​muusikada halkii ay ku raaxeysan lahaayeen codka dabiiciga.
Hadiyadda oo ah codka shimbir ama biyo ku dhacda guga ayaa la waayayaa habsami u eg nooc dhego la'aan ah. Xasiloonida chorus ee dunida dabiiciga ah waxay halis ugu jirtaa in la waayo oo ay lumiso muhiimadda jiilka hadda jira, maadaama dadku iska indhatiraan dhawaaqyada ku hareeraysan.
Heerarka buuqa gadaashiisa ee meelaha qaarkood ku sii kordhaya waxay dadka ugu hanjabayaan inay ka warqabin dhawaaqyada qaarkood sida heesta canary, biyaha daadanaya ama qulqulka caleemaha geedaha marka ay dabayshu jirto, oo mararka qaarkood laga maqli karo xitaa magaalooyinka cagaaran.
Weli lama oga hubaal sababta, laakiin waxaa jira daraasado xaqiijinaya dhageysiga dhawaaqa dabeecadda sameyneyso waxay faa iido u leedahay caafimaadka. Maskaxda deji, muruqyada dabci, buuqa iska ilaali, iwm. Tani waxay noqon kartaa maxaa yeelay bini-aadamka malaayiin sano oo horumar ah wuxuu la xiriiriyaa dhawaqyada aamusan ee dabeecadda iyo nabadgelyada
Sida looga fogaado wasakheynta buuqa magaalooyinka
Maaddaama taraafikada waddooyinka ay tahay isha ugu weyn ee buuq, waa inaan diiradda saarnaa yareynta. Waxaa jira kaabayaal dhismayaal lagu sameeyo waddooyinka waawayn ee guryaha ag mara ama kuwa magaalooyinka ah (waxay maraan bartamaha magaalada) si looga fogaado buuq xad dhaaf ah.
Tusaale ahaan, waan helnaa shaashadaha buuqa. Kuwani waa gidaarro laga dhisay cidhifyada waddooyinka si loo yareeyo xaddiga buuqa ka gudba iyaga. Deegaanka magaalooyinka sidoo kale waxay noqon karaan geedo iyo geedo yaryar oo, marka laga reebo dhimista buuqa, nadiifiya hawada wasakhaysan.
Waxaa jira mashruucyo looga faa'iideysanayo tamarta la cusboonaysiin karo lagana fogaado buuqa la horumarinayo. Waxay ku saabsan tahay saqafyada qorraxda ee waddooyinka waaweyn. Jidadka, jidadka waaweyn iyo jidadka tareenka ku dabool daboolka qorraxda sawir-qaadeyaasha qorraxda durba waa ikhtiyaar leh rakibidda aan caadiga ahayn ee hawlgalka, sida khadka tareenka xawaaraha sare ku socda ee Belgium.
Dhibaatada ay keento qorraxda waaberiga iyo makhribka ayaa si weyn looga hortagi lahaa, iyo sidoo kale kuleylka kuleylka ee matoorada aagagga hawo sare leh sida lamadegaanka iyo dalalka diirran iyo waxay si weyn u yareyn doontaa buuqa ka baxa magaalooyinka. Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay tabarucaadka tamarta ee tani ay ku lug leedahay, oo ka imanaya cusbooneysiin, ilo aan wasakheyn iyo ilo waxtar leh.
Sida aad u aragto, dhawaqa lama arki karo isha aadanaha, laakiin cawaaqibyadiisu waa kuwo aad u daran. Sidaa darteed, waa inaan sameynaa qaybteena si aan uga fogaanno buuqa badan oo aan u yeelanin dhibaatooyin caafimaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Wasakheynta buuqa
kevin horumitero dijo
Kiiskeyga sida caadiga ah waxaan dhageysan jiray muusigga oo leh sameecado saacado ah cod aad u sarreeya oo runtii waxaan lahaa walaac badan iyo walaac aad u badan.
Waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta, salaanta ka timid Peru!
Ku jawaab kevin Carruitero
Madrid waxay dejisay qorshe hagaajinta tayada hawada ah